Amụma Oscar 2021 - Ozi
Nkọwa Oscar 2021: Site na Chadwick Boseman na Glenn Close
Nke mbụ bụ Golden Globes. Mgbe ahụ, anyị nwetara Grammy . Ma ugbu a, abalị kachasị ukwuu na oge onyinye niile dị anyị: Oscars. (Anyị maara, anyị maara, anyị amafere SAG Awards, na BAFTAs, na WGA kwuo, na DGA kwuo… nwere ndị ọzọ? Eleghị anya.)
Na agbanyeghi na anyị ka na-ewute eziokwu na Regina King (na Rosamund na Zendaya) dị kpoo , nke ahụ apụtaghị na anyị enweghị obi ụtọ maka 93rd Annual Academy Awards, na-ewere ọnọdụ na Sọnde, Eprel 25, 2021, na 8 elekere. /WA / 5 pm PT na ABC.
ihe esi nri taa India
Na atụmanya nke ihe omume kpakpando, anyị agabigala ndị ahọpụtara jiri mpekere ezé mepụtara pasent 100 nke ziri ezi, ọ dịghị ụzọ-anyị ga - esi nweta - nke a - ndepụta na - ezighi ezi nke 2021 Oscar amụma. Nke a bụ onye anyị na-atụ anya iziga okwu nnabata na Academy Awards n'abalị…
Njikọ: Ndenye aha Oscar 2021: Nke a bụ Onye Mebiri
Kachasị mma …bọchị Andra
Viola Davis, Isi Ala Black Ma Rainey
Bọchị nke abụọ, United States vs. Billie ezumike
Vanessa Kirby, Iberibe otu Nwanyị
Carey Mulligan, Nwanyị Nwanyị kwere nkwa
Ọ D OK MMA, ikwu nke a bụ otu ụdị nchịkọta ga-abụ okwu ekwesighi. Ihe ngosi nke ndi n’otu n’otu n’otu putara bu ihe itunanya.
Davis siri ike ma na-agbawa obi dị ka aha aha ya Ma Rainey . Nlekọta Carey Mulligan nke Cassie na Nwanyị Nwanyị kwere nkwa nuanced na-emebi ihe. Mana mmadu, oh nwoke, bu Andra Day di egwu dika Billie Holiday.
Day na-eweta ọtụtụ n'ígwé na ọrụ, nke anyị na-ebu amụma ga-irite ya na Academy Award afọ a. O doro anya na ọ bụ onye mbu, na-agbanyela Golden Globe for Best Actress na Drama. Oh, na anyị kwuru, nke ahụ bụ n'ezie ya na-abụ abụ n'ime ihe nkiri niile?!
esi gbaa mukee n'ụlọ Atụmatụ
Dan MacMedan / Onye ntinye / Getty Images
EGO Kachasị Mma… Chadwick Boseman
Ahmed Osika, Ofda nke metal
Chadwick Boseman, Isi Ala Black Ma Rainey
Anthony Onyekwere, Nna
Gary Oldman, Nwoke
Steve Yeun, Iyi egwu
Mmeri a meriri Boseman dị ka nzọ kachasị nchekwa nke isi niile n'afọ a. O nwetala nkwanye ugwu dị elu maka ya Ma Rainey arụmọrụ na Golden Globes. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịchọ Anthony Hopkins iji nweta nnabata kwesịrị ekwesị maka arụmọrụ ya Nna , o yighị ka ọ ga-abụ.
Na mgbakwunye, anyị na-atụ anya n'ụzọ zuru ezu Nwunye Boseman, Taylor Simone Ledward , iji kwuo okwu nnabata n’aha di ya. O nwetala akwụkwọ akụkọ na-eso ụtụ ọma ya mgbe Boseman's Globes na Critics Choice Award meriri.
Steve Granitz / Onye ntinye / Getty Images
Ihe kachasị mma na-akwado TR Glenn Close
Maria Bakalova, Onyeoma Tochukwu Nnamani
Glenn Nso, Hillbilly Elegy
Olivia Colman, Nna
Amanda Seyfried, Nwoke
Onyekachi Nwoke, Iyi egwu
Nke mbu, biko abiala maka anyi, mana anyi na - ekwu na Glenn Close ga - eje ije na ihe oyiyi Nkwado Kachasị Mma n’afọ a. Anyi maara, anyi mara. Enweela nyocha ole na ole na-adịbeghị anya banyere ihe nkiri ya Hillbilly Elegy . Yabụ kedu ihe anyị ji chee na ọ ga-emeri? Maka na ọ bụ ya jọo njọ ugbua.
Nke ahụ ziri ezi: Nso nso enwetabeghị Oscar n'ihu. Dịka, olee otu nke ahụ si kwe omume? A hoputara ya maka nturu ugo asatọ ugboro na mgbe a na-akpọghị aha ya. Enweghi ndi ozo doro anya na ngwugwu a (obu ezie na ihe ngosi a di nma), o yikarịrị ka nso nso ga-emeri dị ka mmata maka ọrụ ya zuru oke. Anyị anaghị ewe iwe maka ya.
Kachasị mma na-akwado ihe nkiri… Leslie Odom, Jr.
Sacha Baron Nye Ikpe nke Chicago 7
Daniel Kaluuya, Judas na Onye-isi ojii ahụ
Leslie Odom, Jr., Otu abalị na Miami…
Paul Raci, Ofda nke metal
Lakeith Stanfield, Judas na Onye-isi ojii ahụ
Regina King nwere ike ọ gaghị enwetatụbeghị Onye isi nchịkwa kachasị mma Otu abalị na Miami , ma anyị na-ebu amụma na Leslie Odom, Jr. ga-enwe ohere iji nweta ebe etiti maka arụmọrụ ya na fim ahụ. Odom na-egwu egwu iconic ọbụ abụ Sam Cooke na ya osise dị oke ike. Yiri nke na-akwado Nkwado nke Omee, odighi onye ozo doro anya, ya mere Odom nwere ohere kwesiri ya ka o rigoro n’elu. Nke ahụ kwuru, Daniel Kaluuya mere merie Golden Globe, ya mere ...
Otu arịrịọ? Anyị nwere olile anya na Odom na-eweta nwunye ya, Nicolette Robinson , tinyere nnukwu mmeri ya.
JEAN-BAPTISTE LACROIX / Onye Nkwado / Getty Images
Ihe osise kachasị mma… ‘Nomadland’
Judas na Onye-isi ojii ahụ
Nwanyị Nwanyị kwere nkwa
Ofda nke metal
Ikpe nke Chicago 7
ihe iri na hummus
Hype abụghị ihe niile, mana afọ a, hype niile dị gburugburu Nomadland , bụ nke dị ịtụnanya Chloé Zhao. N'oge na-adịbeghị anya, Zhao mere akụkọ ihe mere eme dị ka nwanyị mbụ nke agbụrụ Asia nke meriri (ma ọ bụ ọbụna bụrụ onye a họpụtara maka) Best Director Golden Globe. Ihe nkiri ya bụ Frances McDormand wee weghaa Globe maka Foto kachasị mma n'afọ a.
Lelee anya ọ bụ ezie. Foto kacha mma nwere ike ọ gaghị abụ naanị nnukwu mmeri Oscar nke Zhao. A họpụtakwara ya maka Onye Ntuzi Kachasị Mma. (Bụ nke ahụ.) abụọ okwu nnabata anyị na-ebu amụma?!)
Njikọ: Chọrọ Howmara Ka E Si Ebi Osimiri Oscar? Anyị ekpuchila gị
kacha mma ịhụnanya nkiri na ụwa
kasị mma mpụ ihe nkiri
ọgwụgwọ maka eke ntutu
top bekee ịhụnanya nkiri
joe jonas net ruru